Dị Dị Mfe Dị Mkpa Na-ehichapụ Ihicha ihu 25 Pack (Tesco) | Nzipu ahia otu ubochi - Lewisham Simple Kind To Skin Cleansing Face Wipes 25 Pack (Tesco)– Ordrs
Dị Dị Mfe Dị Mfe Na-ehichapụ Ihu Ihicha 25 Pack (Tesco)
Dị nro karịa silk na enweghị obi ebere na etemeete, Simpledị Mfe Dị Mkpa Anyị na-ehichapụ Ihucha ihu bụ ihe nro dị nro nke na-ehichapụ abụba, adịghị ọcha na etemeete nke ọma, ọbụlagodi mascara mmiri na-adịghị. Ha dị mma, ngwa-ngwa iji ma tinye mgbakwunye zuru oke na akpa etemeete ọ bụla, ihe mgbatị ahụ na ime ụlọ ịwụ. Ha na-enye mmụcha dị nro ma ọ bụ metụ aka maka anụ ahụ na-ahụ mma kwa ụbọchị, ebe ọ bụla ị nọ. Ihichapụ ihu anyị adịghị akpọnwụ, na-akpasu anụ ahụ ma ọ bụ hapụ ihe fọdụrụnụ. Ha di nma iji mee ka ihe nhichapu ihe na-ehicha ma obu akụkụ nke usoro nhicha gi kwa ubochi. Ihe bụ ihe ọzọ, gị enwe mmetụta ọsọ ọsọ anụ na-ekpe mmetụta dị ọcha, ọhụrụ na-ntabi hydrated.
A na-eji nhichapụ ihu dị nro dị nro karịa eriri silk, ndị na-ehicha ihe dị nro, mmiri dị ọcha na ihe ndị na-ahụ n'anya anụ ahụ dịka Vitamin B5 na Vitamin E. Simple Face Wipes bụ ndị na-enweghị ntụpọ ma enweghị mmanụ na-esi ísì ụtọ na enweghị kemịkal siri ike nke nwere ike iwe iwe akpụkpọ gị. Ihicha ihu ọ bụla dị ọhụrụ dị ka nke mbụ, ekele maka teknụzụ aqua-lock anyị nke na-enyere aka igbochi nhicha ihu na-ehichapụ. Ihicha ihu ọ bụla na-adị ọhụrụ ma dị irè, ọbụlagodi nke ikpeazụ. Onye mmeri nke Onyinye Mma Mma (Best Wipes Wipes), a na-anwale ma jiri ihu ọma na-ehichapụ ihu anyị. Anyị na-elekọta ụdị anụ ahụ niile dị nro - yabụ anyị kere ha ka hypoallergenic.
Maka nsonaazụ kacha mma: hichaa ehihie na abalị site n'iji nwayọ hichapụ Simpledị Mkpụcha Skin na-eme ka nhicha ihu na-acha anya, ihu, olu na ọbụna egbugbere ọnụ iji mee ka akpụkpọ ahụ dị ọcha. Mascara agaghị agbagha? Jide nhichapụ n'elu ebe isi ike maka sekọnd ole na ole tupu ihichapụ. Kwụsị ihicha ihu gị na-ehichapụ site na icheta iji weghachite mkpọ ahụ.
Dị todị Dị Mfe nke Skin Na-ehicha jiri nwayọọ hichaa akpụkpọ ahụ adịghị ọcha, wepu ihe ntecha, pịglị pores niile na mma nke ihu ihu
Na-ahapụ enweghị ihe edozi ahụ, ihu anyị na-ehichapụ ozugbo na-enye ihu gị ume ma na-eme ka ihu gị dị ọcha ma nwee ume ọhụrụ
Ihe nhicha ahụ anyị na-ehichapụ na-enweghị isi ma nwee mmanụ na-esi ísì ụtọ ma ọ bụ agba ma ọ bụ kemịkal siri ike nke nwere ike iwe iwe
Kwesịrị ekwesị maka anụ ahụ dị nro, a na-anwale ma jiri ya mee ka ọ dị mma
Ngwunye mkpọchi mmiri ọhụrụ, na-egbochi ihu ihu na-ehichapụ ma na-eme ka nhichapụ ọ bụla dị ọhụrụ & dị nro karịa mgbe ọ bụla
A na-eji ihe dị nro dị nro karịa eriri silk, nhicha dị nro, mmiri dị ọcha okpukpu atọ na ihe ndị na-ahụ n'anya dị ka vitamin B5 na vitamin E